Tiada keputusan dijumpai untuk
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု & ကွတ်ကီးပေါ်လစီ
FRANKE ဦးပိုင် AG နှင့် ၎င်း၏ပေါင်းစည်းကုမ္ပဏီများ (အတူတကွ ဤနေရာ၌ “FRANKE”၊ “ကုမ္ပဏီ”၊ “ကျွန်ုပ်တို့သည်”၊ (သို့) “ကျွန်ုပ်တို့ကို” အဖြစ် ရည်ညွှန်းသည်) က သင်၏ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုကို ကာကွယ်ရန် ခိုင်မာစွာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပါသည်။ FRANKE က ၎င်း၏ကုန်ပစ္စည်းများကို သင်၏စိတ်ဝင်စားမှုနှင့် ဤဝဘ်ဆိုက်ထဲ သင်၏ဝင်ကြည့်မှုအတွက် အသိအမှတ်ပြုပါသည်။ သင်၏ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အရေးကြီးသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ဝဘ်ဆိုက်ထဲ ဝင်ကြည့်သည့်အခါ သင့်အနေနှင့် ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာမှု ရှိစေလိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဝဘ်ဆိုက်များထဲ ဝင်ကြည့်ချိန်အတွင်း ကောက်ယူသည့် ကိုယ်ရေးဒေတာကို ကျွန်ုပ်တို့က တရားဝင်ပြဌာန်းချက်များအရ လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု (“ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုပေါ်လစီ”) ဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ သင့်ကို အသိပေးလိုပါသည်။
အထွေထွေ ဒေတာကာကွယ်ရေးစည်းမျဉ်း (“GDPR”) (သို့) အခြား သက်ဆိုင်ရာဥပဒေမှန်သမျှတို့၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အတွင်းရှိ ထိန်းချုပ်သူ ဆိုသည်မှာ ဝဘ်ဆိုက်ရှိ ထုတ်ဝေသူအမည်နေရာတွင် ပြဌာန်းထားသည့် သက်ဆိုင်ရာ Franke ကုမ္ပဏီ ဖြစ်သည်။
ကိုယ်ရေးဒေတာ ဆိုသည်မှာ ခွဲခြားဖော်ပြထားသော (သို့) ခွဲခြားဖော်ပြနိုင်သော သဘာဝလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်မှန်သမျှ ဖြစ်ပြီး၊ ခွဲခြားဖော်ပြနိုင်သော ပုံစံမှာ အထူးသဖြင့် အမည်၊ မည်သူဖြစ်ကြောင်း ခွဲခြားနိုင်သော နံပါတ်၊ တည်နေရာဒေတာ၊ အွန်လိုင်း မျိုးမည်မှတ်သင်္ကေတ (သို့) အဆိုပါ သဘာဝလူပုဂ္ဂိုလ်၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာ၊ မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ၊ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ (သို့) လူမှုသက်သေခံအမှတ်အသားကို ဖော်ပြသော နောက်ထပ် အထူးအင်္ဂါရပ်များဖြင့် တိုက်ရိုက် (သို့) သွယ်ဝိုက်၍ ခွဲခြားဖော်ပြနိုင်သော သဘာဝလူပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှကို ဆိုလိုသည်။ ၎င်းတွင် သင်၏ ပထမအမည်နှင့် နောက်ဆုံးအမည်၊ သင်၏ လိပ်စာနှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ သင်၏ ဖုန်းနံပါတ် (သို့) သင်၏ မွေးရက်ကဲ့သို့ အချက်အလက် ပါဝင်ပါသည်။ ကိုယ်ရေးဒေတာသည် မည်သည့်ပုံစံနှင့်မဆို (ဉပမာ စာရွက်၊ အီလက်ထရောနစ်၊ ဗီဒီယို၊ အော်ဒီယို) ဖြစ်နိုင်သည်။ ကိုယ်ရေးဒေတာအားလုံးကို မျှတစွာဖြင့် ဥပဒေနှင့်လျော်ညီစွာဖြင့် လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်ဖို့ သေချာစေအောင် FRANKE က လိုအပ်တဲ့အဆင့်များ ဆောင်ရွက်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပြီးဖြစ်သည်။ ကိုယ်ရေးဒေတာထဲ ဝင်ခွင့်ရှိသော ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ထမ်းများ၊ ဒေတာလုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်သူများနှင့် တတိယပါတီ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများသည် ကိုယ်ရေးဒေတာ၏ လျှို့ဝှက်ထားရှိမှုကို လေးစားရန်နှင့် ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုပေါ်လစီကို လိုက်နာရန် တာဝန်ရှိသည်။ သင်က ကိုယ်ရေးဒေတာကို ကုန်ပစ္စည်းများ (သို့) ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် အမှာစာ၏ အစိတ်အပိုင်းအနေဖြင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ပုံစံများ (သို့) အီးမေးလ်များ ဖြည့်ခြင်း၊ မှာယူထားသော ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ မေးမြန်းချက်များ (သို့) တောင်းဆိုချက်များနှင့် အလားတူအခြေအနေများတွင် သင်က ကျွန်ုပ်တို့အား အချက်အလက် စီစဉ်ပေးရန် ရွေးချယ်ထားသည်မှတဆင့် ကျွန်ုပ်တို့ဆီ ပေးသွင်းသည့်အခါမှသာလျှင် ကျွန်ုပ်တို့က ကိုယ်ရေးဒေတာကို ကောက်ယူပါသည်။
ဒေတာဘေ့စ်နှင့် ၎င်း၌ရှိသော အကြောင်းအရာများကို FRANKE တွင် ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပါသည် (သို့) ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စား ဆောင်ရွက်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့အား တာဝန်ခံသော ဒေတာလုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်သူများ (သို့) ဆာဗာများတွင် ထားရှိပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ဆီ သင် ထုတ်ဖော်လိုက်သော ကိုယ်ရေးဒေတာဆိုင်ရာ အသုံးပြုမှုအတွက် ထိန်းချုပ်မှုနှင့် တာဝန်ယူမှုကို ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဆက်လက်ထားရှိပါသည်။ ဤဒေတာမှ အချို့ကို ဒေတာကာကွယ်ရေးဥပဒေများအရ သင်နေထိုင်သော စီရင်ပိုင်ခွင့်ဒေသမှ ခြားနားနိုင်သည့် ယူနိုက်တက်စတိတ်ကဲ့သို့ အခြားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိဒေသ၌ ရှိသော ကွန်ပျူတာများတွင် သိုလှောင်နိုင်ပြီး လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ သင် နေထိုင်ရာနိုင်ငံတွင် အသုံးချသည့် ဒေတာကာကွယ်မှုနှင့် တန်းတူသော ဒေတာကာကွယ်မှုများကို ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်နိုင်အောင် အဆိုပါနိုင်ငံရှိ ထိန်းချုပ်သူကို အလိုရှိရန်အတွက် သင့်တော်သည့် ကာကွယ်မှုများ နေရာတကျ ရှိထားစေရန် ကျွန်ုပ်တို့က သေချာအောင်လုပ်ဆောင်ပါသည်။
3. ကိုယ်ရေးဒေတာ ကောက်ယူခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း - တရားဝင်ဖြစ်မှု အခြေခံ
သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုက်ကို သင့်ကိုယ်ရေးဒေတာ ထုတ်ဖော်မှုမပြုဘဲ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုက် အသုံးပြုရန် သတ်မှတ်ချက်တစ်ရပ်အနေဖြင့်၊ သင့်အတွက် ကုန်ပစ္စည်း (သို့) ဝန်ဆောင်မှု စီစဉ်ပေးရန် (သို့) သင့်တောင်းဆိုချက်အရ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုက်ဖြင့် ဆက်သွယ်ရန် လိုအပ်သည်မှအပ၊ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ပေးရန် မလိုအပ်ပါ။ အောက်ပါတို့၌ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုက်တွင် သင့်ဒေတာကို ကောက်ယူသော၊ လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်သော၊ အသုံးပြုသော နည်းနာပုံစံကို ရှင်းပြထားပါသည်:
a) ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုက်ထဲ ဝင်ကြည့်သောအခါ ဒေတာ
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်ကို အသုံးပြုသောအခါ၊ သင်က ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုက်ဖြင့် ဆက်သွယ်နိုင်စွမ်းရှိရန် အလို့ငှာ (သို့) မရိုးသားသော ဝင်ခွင့်၊ ချွတ်ယွင်းချက်ရှာခြင်း (သို့) စမ်းသပ်ခြင်းကဲ့သို့ လုံခြုံရေးရည်ရွယ်ချက်အလို့ငှာ ဒေတာကို လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကောက်ယူသော ဒေတာတွင် သင့်အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ၏ အမည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုက်ဖြင့် လင့်ခ်ချိတ်ရန် သုံးသော ဝဘ်ဆိုက်၊ ဝင်ကြည့်သော နေ့စွဲနှင့်အချိန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုက်အနက် သင် ဝင်ကြည့်သော ဝဘ်ဆိုက်များနှင့် သင်၏ IP-လိပ်စာတို့ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်မှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများ စီစဉ်ပေးရန်အလို့ငှာ လိုအပ်ပါသည် (သို့) ဆက်သွယ်မှုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့၏ တရားဝင်အကျိုးပြုပုံစံအပေါ် အခြေခံပါသည်။ ဤဆက်သွယ်မှုမရှိဘဲနှင့် ဝဘ်ဆိုက်ကို ပြသ၍မရသောကြောင့် အဆိုပါဆောင်ရွက်မှုဆိုလျှင် သင့်အတွက်လည်း အကျိုးရှိသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့က ယူဆပါသည်။ သင့်အနေနှင့် ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက် သင့်ဒေတာလုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်မှုကို အနာဂတ်တွင် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်မည့် အကြောင်းပြချက်များ မပေးဘဲနှင့် အချိန်မရွေး ကန့်ကွက်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်မှုကို တစ်ဦးချင်းဝဘ်ဆိုက်အသုံးပြုသူများ (သို့) သာမန်အသုံးပြုသူများအတွက် နည်းပညာအကြောင်းကိစ္စကြောင့် ရပ်လိုက်ရန် မဖြစ်နိုင်သဖြင့်၊ သင့်ကိုယ်ရေးဒေတာလုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်မှုကို ဝဘ်ဆိုက်သို့ ကန့်ကွက်ချက် အရေးဆိုပြီးနောက်မှာလည်းပဲ လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်ကို၊ ကျွန်ုပ်တိုက ထောက်ပြလိုပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင်၏ အကျိုးခံစားခွင့်၊ အခွင့်အရေးများနှင့် လွတ်လပ်ခွင့်များထက် ပို၍အလေးသာသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်မှုအတွက် သဘောတူရမည်ဖြစ်သော အကြောင်းပြချက်များ ရှိနေပါသည်။ အထက်၌ ဖော်ပြထားသည့် လုပ်ငန်စဉ်ဆောင်ရွက်မှုကို တားမြစ်လိုလျှင်၊ ရိုးရှင်းသောနည်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုက်ထဲ ဝင်ကြည့်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်လိုက်ပါ။ ယင်းဒေတာကို လုံခြုံရေးကိစ္စအနေနှင့် သက်သေခံစာရွက်စာတမ်း ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက် ပို၍ကြာကြာ သိုလှောင်ရန် အလိုမရှိခဲ့လျှင် အချိန်ကဏ္ဍကုန်ပြီးနောက်မှာ ဖျက်ပစ်ပါမည်။
b) သုံးစွဲသူအကောင့် ဖွင့်ခြင်းဆိုင်ရာ ဒေတာ
သင်က ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုက်တွင် သုံးစွဲသူအကောင့် ဖွင့်လျှင်၊ သင် ပေးသော ကိုယ်ရေးဒေတာ (ဥပမာ အမည်၊ လိပ်စာ၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ တယ်လီဖုန်း၊ ရာထူးနှင့် ဝင်ခွင့်ဒေတာ) ကို FRANKE ၏ သုံးစွဲသူဒေတာဘေ့စ်တွင် သိုလှောင်ပြီး လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ဤဒေတာကို သဘောတူစာချုပ် (သို့) ယခင်သဘောတူစာချုပ် ဆောင်ရွက်ချက်များ ဖြည့်ဆည်းရန်အတွက် လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ သင်သည် သုံးစွဲသူအေကာင့်ကို အချိန်မရွေး သက်ဝင်ခလုတ်ပိတ်နိုင်ပါသည် နှင့်/(သို့) အနာဂတ်သက်ရောက်မှုအတွက် အကြောင်းပြချက်များ မပေးဘဲ အောက်၌ပေးထားသည့် ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာသို့ ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့် ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက် သင့်ကိုယ်ရေးဒေတာကို နောက်ထပ် သိုလှောင်မှုနှင့် အသုံးပြုခြင်းမှ ကန့်ကွက်နိုင်ပါသည်။ ကန့်ကွက်သည့်ကိစ္စမျိုးတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့က သင့်ကိုယ်ရေးဒေတာကို ချက်ချင်း ဖျက်ပစ်ပါမည်။ သုံးစွဲသူအကောင့် ပိတ်သိမ်းလိုက်သည့်ကိစ္စမျိုးလည်းပဲ ကျွန်ုပ်တို့က သင်၏ သုံးစွဲသူအကောင့်ကို ဖျက်ပစ်ပါမည်။
c) ဆက်သွယ်ရန် ပုံစံစာရွက် (သို့) အီးမေးလ်မှတဆင့် သင့်၏ဆက်သွယ်မှု
သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို (ဥပမာ၊ ဆက်သွယ်ပုံစံစာရွက် (သို့) အီးမေးလ်မှတဆင့်) ဆက်သွယ်လျှင်၊ ဆက်သွယ်ပုံစံစာရွက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား ပေးသော သင့်ကိုယ်ရေးဒေတာကို FRANKE က သိုလှောင်ပြီး လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ဆက်သွယ်ပုံစံစာရွက်သုံးသော ကိစ္စမျိုးတွင် ကောက်ယူသည့် ဒေတာကို သက်ဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ပုံစံစာရွက်တွင် မြင်နိုင်ပါသည်။ ၎င်းဒေတာကို သင့်တောင်းဆိုချက်နှင့်ပတ်သက်၍ ဖြေကြားရန်အတွက် နှင့်/(သို့) အဆက်အသွယ်နှင့် ဆက်စပ်နည်းပညာစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ပြဌာန်းချက်အတွက် သီးသန့် သိုလှောင်ပြီး အသုံးပြုပါသည်။ ဤဒေတာလုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်မှုကို သဘောတူစာချုပ် (သို့) ယခင်သဘောတူစာချုပ် ဆောင်ရွက်ချက်များ ဖြည့်ဆည်းရန်အတွက် ဆောင်ရွက်ပါသည် (သို့) လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်မှုသည်လည်းပဲ ကျွန်ုပ်တို့၏ တရားဝင်အကျိုးပြုပုံစံအတွင်းမှာ ရှိနေပြီး အဆိုပါတောင်းဆိုချက်များဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်မှုက ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြန်အလှန်အကျိုးခံစားခွင့်များ ဖြစ်ကြသောကြောင့် ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ပဋိပက္ခဖြစ်နေတဲ့ အကျိုးခံစားခွင့်များကို သင့်အကျိုးခံစားခွင့်ထက် အလေးမသာစေဘဲ လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်မှုကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။
တောင်းဆိုချက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်မှု ပြီးဆုံးပြီးနောက်မှာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် စာဖြင့်ရေးသားထားသော (သို့) ဒစ်ဂျစ်တယ် ဆက်သွယ်မှုများကို ပြဌာန်းဥပဒေအရ၊ တရားဝင် ဆက်လက်ထားရှိမှု အချိန်ကာလများ (သို့) နည်းဥပဒေများကန့်သတ်ချက်တို့ တည်ရှိသလောက်သာလျှင် (သို့) တရားဝင်အရေးဆိုချက်များအတွက် အခိုင်အမာ ပြောဆိုရန်၊ ကျင့်သုံးရန် (သို့) ခုခံချေပရန် နောက်ထပ် သိုလှောင်မှုကို လိုအပ်သလောက်သာလျှင် ဆက်လက်ထားရှိပါသည်။
d) သတင်းလွှာမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ အကောင့်ဖွင့်ဒေတာ
သင်က ကျွန်ုပ်တို့၏ သတင်းလွှာဝန်ဆောင်မှုတွင် မှတ်ပုံတင်လျှင်၊ သင့်ကိုယ်ရေးဒေတာ (ဥပမာ အမည်၊ လိပ်စာနှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာ) ကို FRANKE က ရောင်းဝယ်ရေး၊ ကြော်ငြာ (သို့) အရောင်းမြှင့်တင်ရေး ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် သိုလှောင်ပြီး လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ဤဒေတာလုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်မှုသည် သင်၏ သဘောတူကျေနပ်ချက်အပေါ် အခြေခံပါသည် (သို့) သဘောတူစာချုပ် လိုက်နာဖြည့်ဆည်းရန်အတွက် ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဤကိစ္စမျိုးဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်တို့က FRANKE ၏ ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ကမ်းလှမ်းချက်များ (သို့) လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များဖြင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ကုန်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ အရောင်းမြှင့်တင်ရေး အချက်အလက်ကို သင့်ဆီ ပုံမှန် ပို့ပေးပါမည်။ အဆိုပါသတင်းလွှာများ လက်ခံရရှိခြင်းတွင် မပါတော့ရန်အတွက် အနာဂတ်ဆိုင်ရာ အကြောင်းပြချက်များ ပေးရန်မလိုဘဲ အောက်က ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာကို ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့် (သို့) သတင်းလွှာရှိ စာရင်းဖျက်ရန် ရွေးပိုင်ခွင့်မှတဆင့် စာရင်းဖျက်ခြင်းဖြင့် အချိန်မရွေး ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါသည်။ စာရင်းဖျက်လိုက်သည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက်၊ သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာကို ကျွန်ုပ်တို့၏ သတင်းလွှာဖြန့်ဝေစာရင်းမှ ချက်ချင်း ဖျက်ပစ်ပါမည်၊ ခြွင်းချက်အနေဖြင့် ဖယ်ထုတ်စာရင်းဒေတာဘေ့စ်ရှိ မိတ္တူကို ကျွန်ုပ်တို့မှာ လက်ဝယ်ထားဖို့ တရားဝင်အကျိုးပြုပုံစံအရ တာဝန်ရှိပြီး၊ ဤသို့ထားမှသာ ကျွန်ုပ်တို့က သင့်ကို သတင်းလွှာဖြင့် ဝန်ဆောင်ပေးမှု မရှိတော့ကြောင်း သေချာအောင်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သဖြင့် မိတ္တူကို ဖျက်ပစ်မည်မဟုတ်ပါ။
ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုပေါ်လစီနှင့် အခြားသဘောတူချက်များကို လိုက်နာအောင် ဆောင်ရွက်ရန် (သို့) အကျိုးသက်ရောက်စေရန်အလို့ငှာ (သို့) FRANKE ကျွန်ုပ်တို့၏ သုံးစွဲသူများ (သို့) အခြားသူများ၏ အခွင့်အရေးများ၊ ပစ္စည်းဥစ္စာများ သို့မဟုတ် လုံခြုမှုကို ကာကွယ်ရန်အလို့ငှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကို တတိယပါတီများသို့ ထုတ်ဖော်ပြနိုင်ပါသည်။ ၎င်း၌ လိမ်လည်တုပမှု တားဆီးခြင်းနှင့် ငွေထုတ်ချေးမှုကြောင့် ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်လာနိုင်သည့် အန္တရာယ်လျော့ချရန်အလို့ငှာ အခြားကုမ္ပဏီများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများဖြင့် အချက်အလက်မျှဝေခြင်း (သို့) အမှာကုန်ပစ္စည်းအတွက် ငွေပေးချေမှုများ လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်ရန် အွန်လိုင်း-ဈေးတွင် ဘဏ်အင်စတီကျူ့မှ ကမ်းလှမ်းပေးသည့် ငွေပေးချေမုခ်ဖြင့် အချက်အလက်မျှဝေခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့လည်းပဲ ကိုယ်ရေးဒေတာကို အစိုးရအေဂျင်စီများနှင့် စည်းမျဉ်းထိန်းအဖွဲ့နှင့် တရားဝင်အာဏာကျင့်သုံးခွင့်ရှိအဖွဲ့များသို့ ဥပဒေအရ (သို့) ပြဌာန်းစည်းမျဉ်းအရ လိုအပ်သည့်အတိုင်း စီစဉ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ယခုကဲ့သို့ ထုတ်ဖော်ချက်ကို တရားဝင်တာဝန် လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုအတွက် လိုအပ်နိုင်ပါသည်၊ (သို့) အများပြည်သူကောင်းကျိုးဖြင့် လုပ်ရသည့် လုပ်ငန်းတာဝန် ဆောင်ရွက်ချက်အတွက် လိုအပ်နိုင်ပါသည် (သို့) ကျွန်ုပ်တို့၏ (သို့) တတိယပါတီ၏ တရားဝင်အကျိုးပြုပုံစံအပေါ် အခြေခံ၍ လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ ဖော်ြပချက်အနက် နောက်ဆုံးအချက်ကိစ္စမျိုးတွင်၊ သင်က အဆိုပါအသုံးပြုမှုကို ကန့်ကွက်ရန် အခွင့်အရေး ရှိသည်ဆိုသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့က သင်၏ အကျိုးခံစားခွင့်များ၊ အခွင့်အရေးများနှင့် လွတ်လပ်ခွင့်များထက် ကျော်လွန်၍ သဘောတူရမည်ဖြစ်သော တရားဝင် အကြောင်းပြချက်များကို လက်တွေ့ပြနိုင်လျှင် သို့မဟုတ် တရားဝင်အရေးဆိုချက်များအတွက် ပြဌာန်းရန်၊ ကျင့်သုံးရန်နှင့် ခုံခံချေပရန် လိုအပ်လာသည့်ကိစ္စမျိုးဖြစ်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့က ဒေတာကို လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်နိုင်ဆဲ ဖြစ်သည်။
4. ကွတ်ကီးများ အသုံးပြုခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုက်၌ မကြာခဏ စီစဉ်ပြုလုပ်သော အသုံးပြုသူစစ်တမ်းများတွင် ပါဝင်ခြင်းသည် ဆန္ဒအလျောက်သာလျှင် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အသုံးပြုသူစစ်တမ်းများကို လုပ်ဆောင်ရန် ဖန်ရှင်နယ်ကွတ်ကီးများကို အသုံးပြုပါသည်။ အသုံးပြုသူစစ်တမ်းက မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် နည်းပညာအချက်အလက်သည် အသုံးပြုသူများက ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုက်ထဲ ဝင်ကြည့်သောအခါ မှတ်တမ်းတင်ထားသော အချက်အလက်နှင့် အတူတူပင် ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူစစ်တမ်း ကာလအတွင်း ပေးသွင်းထားသည့် သင့်အဖြေများကို သင်၏ IP-လိပ်စာကဲ့သို့ သင်၏ ကိုယ်ရေးဒေတာနှင့် လင့်ခ်ချိတ်မည်မဟုတ်ပါ။
5. ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုက်ရှိ တတိယပါတီ ဝန်ဆောင်မှုများ (သို့) အကြောင်းအရာ
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုက်တွင် တတိယပါတီဝန်ဆောင်မှုများ နှင့်/(သို့) တတိယပါတီအကြောင်းအရာ ပါဝင်ပါသည်။ သင်က အဆိုပါ တတိယပါတီဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုသောအခါ (သို့) တတိယပါတီအကြောင်းအရာကို ပြသသောအခါ၊ ဆက်သွယ်မှုဒေတာကို နည်းပညာအကြောင်းပြချက်များဖြင့် သင်နှင့် ဆိုင်ရာစီစဉ်သူတို့ အကြား၌ ဖလှယ်ရပါသည်။ FRANKE သည် တတိယပါတီ စီမံခန့်ခွဲသော အဆိုပါဝဘ်ဆိုက်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဝဘ်ဆိုက်များကိုလည်း မထိန်းချုပ်ပါ၊ ကိုယ်ရေးလုံခြုမှုအလေ့အကျင့်များကိုလည်း မထိန်းချုပ်ပါ။ တတိယပါတီဝဘ်ဆိုက်စီစဉ်သူများ၏ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုအလေ့အကျင့်များသည် FRANKE ၏ ကိုယ်ရေးလုံခြုမှုအလေ့အကျင့်များမှ ခြားနားသောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့က တတိယပါတီဝဘ်ဆိုက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကိုယ်စားပြုမှုများကို အတည်ပြုမပေးပါ (သို့) မပြုလုပ်ပါ။ သင့်ကိုယ်ရေးဒေတာကို အဆိုပါဝဘ်ဆိုက်များသို့ ပေးမသွင်းမီ အဆိုပါပေါ်လစီများကို စစ်ကြည့်ပါ။
သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများစီစဉ်သူ (သို့) အကြောင်းအရာစီစဉ်သူသည် နောက်ထပ် ကိုယ်ပိုင်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်လည်း သင့်ဒေတာကို လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အကောင်းဆုံးဗဟုသုတဖြင့်၊ ဒေတာအား ကိုယ်ပိုင်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်သည်ဟု သိထားရသည့် စီစဉ်သူများ၏ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် အကြောင်းအရာကို ကျွန်ုပ်တို့က သီးသန့်စီစဉ်ထားရှိပြီး၊ ဤနည်းလမ်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုက်တွင် ၎င်းတို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများ (သို့) အကြောင်းအရာ တင်ထားသည်မှလွဲ၍ အခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက် သုံးသည့် ဆက်သွယ်မှုမှန်သမျှကို ပိတ်ဆို့ပါသည်၊ သို့မဟုတ် ဆက်သွယ်မှုသည် ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုရန် ရွေးချယ်လိုက်မှသာလျှင် ချက်ချင်း အလုပ်လုပ်ပါမည်။ သို့သော်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် တတိယပါတီများက ကောက်ယူပြီး လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်သည့် ဒေတာအပေါ် ထိန်းချုပ်မှု မရှိသဖြင့်၊ သင့်ဒေတာဆိုင်ရာ အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်မှု၏ နယ်ပယ်နှင့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ပတ်သက်၍ အတည်ပြုနိုင်သော အချက်အလက်ကို စီစဉ်ပေးနိုင်သော အနေအထားမျိုး ကျွန်ုပ်တို့တွင် မရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပါတနာကွန်ရက်များ၊ အရောင်းအဝယ်လုပ်သူများ၊ ပေါင်းစည်းအဖွဲ့များ (သို့) အခြားတတိယပါတီများ၏ ဝဘ်ဆိုက်များသို့ သို့မဟုတ် ဝဘ်ဆိုက်များမှ လင့်ခ်များ ပါရှိနိုင်ပါသည်။ ဤလင့်ခ်များထဲ ဝင်လိုက်ခြင်းဖြင့်၊ FRANKE ဝဘ်ဆိုက်မှ အလိုအလျောက် ထွက်ပြီးဖြစ်သည်။ FRANKE သည် တတိယပါတီ စီမံခန့်ခွဲသော အဆိုပါဝဘ်ဆိုက်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဝဘ်ဆိုက်များကိုလည်း မထိန်းချုပ်ပါ၊ ကိုယ်ရေးလုံခြုမှုအလေ့အကျင့်များကိုလည်း မထိန်းချုပ်ပါ။ တတိယပါတီဝဘ်ဆိုက်စီစဉ်သူများ၏ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုအလေ့အကျင့်များသည် FRANKE ၏ ကိုယ်ရေးလုံခြုမှုအလေ့အကျင့်များမှ ခြားနားသောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့က တတိယပါတီဝဘ်ဆိုက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကိုယ်စားပြုမှုများကို အတည်ပြုမပေးပါ (သို့) မပြုလုပ်ပါ။ သင့်ကိုယ်ရေးဒေတာကို အဆိုပါဝဘ်ဆိုက်များသို့ ပေးမသွင်းမီ အဆိုပါပေါ်လစီများကို စစ်ကြည့်ပါ။
FRANKE သည် Facebook, Google+, LinkedIn နှင့် Twitter ကဲ့သို့ လူမှုကွန်ရက်များဆိုင်ရာ လူမှုပလတ်အင်များ (“ခလုတ်များ”) ကို အသုံးပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုက်ထဲ သင် ဝင်ကြည့်သောအခါ၊ ဤခလုတ်များကို မူလသတ်မှတ်ချက်ဖြင့် ပိတ်သိမ်းထားပါသည်၊ တနည်းဆိုသော် သင်၏ ဝင်ရောက်စွတ်ဖက်မှု မရှိဘဲနှင့် ၎င်းတို့က ဒေတာကို ဆိုင်ရာလူမှုကွန်ရက်များသို့ ပိုပေးမည်မဟုတ်ပါ။ ဤခလုတ်များကို သင် အသုံးပြုနိုင်စွမ်း မရှိမီ၊ ၎င်းတို့အပေါ်မှာ ကလစ်နှိပ်ခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့ကို အသက်ဝင်အောင်လုပ်ရပါသည်။ ထိုအခါ ၎င်းတို့သည် အသက်ဝင်ချိန်မှ ပြန်၍ ခလုတ်ပိတ်သည့်အချိန်ထိ (သို့) သင်၏ ကွတ်ကီးများကို ဖျက်ပစ်လိုက်သည့်အချိန်ထိ ဆက်လက်အသက်ဝင်နေပါမည် ('ကွတ်ကီးများ' တွင် ကြည့်ပါ)။
၎င်းတို့ကို အသက်ဝင်အောင်လုပ်ပြီးနောက်မှာ၊ ဆိုင်ရာလူမှုကွန်ရက်၏ ဆာဗာဆီသို့ တိုက်ရိုက်လင့်ခ်ကို ပြဌာန်းပေးသည်။ ထိုအခါ ၎င်းက ခလုတ်နှင့်ဆိုင်သော အကြောင်းအရာများကို လူမှုကွန်ရက်မှ သင်၏ဘရောက်ဆာသို့ တိုက်ရိုက် လွှဲပြောင်းပေးပြီး ဝဘ်ဆိုက်ထဲ ထည့်သွင်းပေးသည်။ ခလုတ်ကို အသက်ဝင်အောင် ဖွင့်ပြီးနောက်မှာ၊ သင်က ခလုတ်ဖြင့် တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်သည်ဖြစ်စေ မဆောင်ရွက်သည်ဖြစ်စေ သီးခြားပုံစံဖြင့် လူမှုကွန်ရက်က ဒေတာကို ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။ သင်က လူမှုကွန်ရက်ထဲ အကောင့်ဝင်ထားလျှင်၊ ကွန်ရက်က ဝဘ်ဆိုက်ထဲ သင်၏ဝင်လည်မှုကို သင်၏အသုံးပြုသူအကောင့်ဖြင့် သတ်မှတ်ပေးသည်။ သင်က လူမှုကွန်ရက်တွင် ဆိုင်ရာသက်ဝင်ခလုတ် မဖွင့်လျှင်လည်း၊ လူမှုကွန်ရက်က အခြား FRANKE ဝဘ်ဆိုက်များထဲ ဝင်လည်မှုကို မသတ်မှတ်နိုင်ပါ။
သင်သည် လူမှုကွန်ရက် အသုံးပြုသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ၎င်းကို ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုက်ထဲ သင်၏၊ဝင်ကြည့်မှုမှ ထုတ်ယူသောဒေတာနှင့် သင်၏အသုံးပြုသူဒေတာဖြင့် မပေါင်းစပ်လိုလျှင်၊ အသက်ဝင်ခလုတ်များကို မဖွင့်မီ သက်ဆိုင်ရာလူမှုကွန်ရက်မှ အကောင့်ထွက်ရမည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် လူမှုကွန်ရက်များက ၎င်းတို့၏ခလုတ်များမှတဆင့် ကောက်ယူသော ဒေတာနယ်ပယ်အပေါ် လွှမ်းမိုးမှုမရှိပါ။ လူမှုကွန်ရက်များ၏ ဒေတာအသုံးပြုမှုပေါ်လစီများတွင် ၄င်းတို့ကောက်ယူသော ဒေတာ၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် နယ်ပယ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်၊ ၎င်းဒေတာ လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်သည့်နည်းနာနှင့် အသုံးပြုသည့်နည်းနာ၊ သင် ကျင့်သုံးနိုင်သော အခွင့်အရေးများနှင့် သင်၏ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုကို ကာကွယ်ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်သည့် ဆက်တင်များကို စီစဉ်ပေးပါသည်။
အဆိုပါသင့်ဒေတာကို ကောက်ယူပြီး လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်သည့် နယ်ပယ်နှင့် ရည်ရွယ်ချက်တို့ဖြင့် သက်ဆိုင်သည့် နောက်ထပ်အချက်အလက်အတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ပါဝင်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများ နှင့်/(သို့) အကြောင်းအရာကို ပိုင်ဆိုင်ပြီး ဤဆက်စပ်အကြောင်းအရာ၌ သင့်ဒေတာကာကွယ်မှုအတွက် တာဝန်ရှိသော စီစဉ်သူများ၏ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုပေါ်လစီများတွင် အကြံဉာဏ်ရယူပါ။
6. တတိယပါတီ လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်သူများ
သဘာတူစာချုပ်ကို လိုက်နာဖြည့်ဆည်းရန်အတွက် မလိုအပ်ခဲ့လျှင်၊ သက်ဆိုင်ရာ တရားဝင်ပြဌာန်းချက်အရ ခွင့်မပြုခဲ့လျှင် (သို့) သင်က ကျေနပ်သဘောတူချက် မပေးခဲလျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်ရေးဒေတာကို တတိယပါတီများသို့ မပေးပို့ပါ။ ဆိုထားပြီးသကဲ့သို့၊ FRANKE သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စား အချို့တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အခြားကုမ္ပဏီများ (သို့) လူများ (“လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်သူများ”) ဖြင့် သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရာတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့က လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်သူများကို ကိုယ်ရေးဒေတာထဲ ဝင်ခွင့်ရအောင် စီစဉ်ပေးရန် လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်သူများသည် ကိုယ်ရေးဒေတာ၏ လျှို့ဝှက်ထားရှိမှုကို ထိန်းသိမ်းရမည်ဖြစ်ပြီး၊ အချက်အလက်ကို FRANKE က သတ်မှတ်ထားသည့် ရည်ရွယ်ချက်များမှလွဲ၍ အခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အသုံးပြုခြင်းမှ ကန့်သတ်ထားပါသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်သူများက ဆောင်ရွက်ရသည့် တာဝန်များတွင် ဥပမာအနေဖြင့် နည်းပညာဆိုင်ရာရှိ လုပ်ငန်းပါတနာများ (သို့) တစ်ဆင့်ခံ-ကန်ထရိုက်တာများ၊ ငွေပေးချေမှုနှင့် ပစ္စည်းပို့ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ငွေထုတ်ချေးမှုကြောင့် ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်လာနိုင်သည့် အန္တရာယ်လျော့ချခြင်း သို့မဟုတ် လိမ်လည်တုပ်မှု တားဆီးခြင်း၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုစီစဉ်ပေးသူများ၊ ရှာဖွေရးအချက်အလက် စီစဉ်ပေးသူများ (သို့) အုပ်စုများအတွင်း လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်မှုများ ပါဝင်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှု၏ ဆောင်ရွက်ချက်အတွက် လိုအပ်သည့် ကိုယ်ရေးဒေတာထဲကိုသာလျှင် ဝင်ခွင့် ရှိပါသည်။ အထူးသဖြင့် အဆိုပါလုပ်ငန်းစည်ဆောင်ရွက်သူများကို သင့်ကိုယ်ရေးဒေတာအား အခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်းမှ (သို့) အသုံးပြုခြင်းမှ တားမြစ်ထားပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် သဘောတူစာချုပ်ဖြင့် (သို့) အခြားတစ်နည်းနည်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်သူများဆီ ထုတ်ဖော်ပြသည့် ကိုယ်ရေးဒေတာကို ကာကွယ်မှု လုံလုံလောက်လောက် စီစဉ်ပေးဖို့အတွက်နှင့်၊ ကိုယ်ရေးဒေတာကို သက်ဆိုင်ရာ ဒေတာကာကွယ်ရေးဥပဒေအရ ကာကွယ်နိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်သူများတွင် လုံလောက်တဲ့ တရားဝင်ဖြစ်မှုဆိုင်ရာ အလုပ်စနစ်စီစဉ်မှုဆိုင်ရာနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ နေရာတကျ ရှိထားဖို့အတွက် သင့်တော်သည့် ဆောင်ရွက်ချက်များကို လုပ်ဆောင်ထားပါသည်။
FRANKE သည် နယ်နမိတ်များ ဖြတ်ကျော်ထားသည့် တရားဝင်အုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ စီမံခန့်ခွဲမှု တည်ဆောက်ပုံများနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ စနစ်များ ရှိထားသော ဂလိုဘယ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ အလေ့အကျင့်များကို ကမ္ဘာအနှံ့ရှိ ကိုယ်ရေးဒေတာအားလုံးအတွက် ကာကွယ်မှု စီစဉ်ပေးရန် ဒီဇိုင်းပုံစံချထားပါသည်။ အချက်အလက်ကို သိရှိရန် (သို့) အချက်အလက်ထဲ ဝင်ခွင့်ရှိထားရန် တရားဝင် လိုအပ်သည်ဟု FRANKE က ဆုံးဖြတ်လိုက်သော အဆိုပါအခွင့်ရ ဝန်ထမ်းများ၊ အေးဂျင့်များ၊ ကန်ထရိုက်တာများ၊ အုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်သူများကို ၎င်းတို့၏တာဝန်များ ဆောင်ရွက်ရန်အလို့ငှာ ကိုယ်ရေးဒေတာထဲ ဝင်ခွင့်ပေးခြင်းသည် FRANKE ပေါ်လစီ ဖြစ်သည်။ FRANKE သည် သင်က ပေးသွင်းသည့်ဒေတာနှင့် ကျွန်ုပ်တို့က စီမံခန့်ခွဲသည့်ဒေတာကို ကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်ခြင်း၊ ဆုံးရှုံးစေခြင်း၊ ဖျက်ဆီးခြင်းနှင့် တတိယပါတီများ ဝင်ခွင့်ပေးခြင်းတို့မှ တားဆီးကာကွယ်ရန် နည်းပညာဆိုင်ရာ အလုပ်စနစ်စီစဉ်မှုဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ချက်များကို အသုံးပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ချက်များကို နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အညီ အလျဉ်မပြတ် ပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်နေပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ဝဘ်ဆိုက်၏ အချို့အစိတ်အပိုင်းထဲ ဝင်ခွင့်ရအောင် ဖွင့်ပေးသည့် စကားဝှက်ကို ကျွန်ုပ်တို့က သင့်အား ပေးသောအခါ (သို့မဟုတ် သင် ရွေးချယ်ထားသည့်နေရာမျိုး)၊ သင်သည် အဆိုပါစကားဝှက်ကို လျှို့ဝှက်ထားရှိရန် တာဝန်ရှိသည်။ စကားဝှက်ကို မည်သူနှင့်မဆို မျှမဝေရန် ကျွန်ုပ်တို့က သင့်အား တောင်းဆိုပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့က ဆက်လက်ထားရှိမည့် အချိန်ကာလ အတိအကျကို အထက်၌ ပေးမထားခဲ့လျှင်၊ ဤအထွေထွေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများက အကျိုးသက်ရောက်ပါမည်:
သင့်ဒေတာကို ရည်ရွယ်ထားရှိသည့် ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် နောက်ထပ် မလိုအပ်တော့လျှင် (သို့) သင်က သင်၏ကျေနပ်သဘောတူချက်ကို ရုပ်သိမ်းလျှင် (သို့) ကျွန်ုပ်တို့၏ တရားဝင်အကျိုးပြုပုံစံကို အခြေခံ၍ အသုံးပြုရန် ကန့်ကွက်ခဲ့လျှင်၊ ပြီးနောက် ကျွန်ုပ်တို့တွင် ကျော်လွန်သော တရားဝင် အကြောင်းပြချက်များ မရှိလျှင်၊ သင့်ဒေတာကို အမြန်ဆုံး ဖျက်ပစ်ပါမည်။ အချို့ကိစ္စမျိုးတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဥပဒေက ဆက်လက်ထားရှိရန် အလိုရှိသောကြောင့်၊ သို့မဟုတ် ဒေတာကို တရားဝင်အရေးဆိုချက်များဆိုင်ရာ ပြဌာန်းချက်၊ ကျင့်သုံးမှု (သို့) ခုခံချေပမှုအတွက် လိုအပ်သောကြောင့်၊ ပို၍ကြာသော ဆက်လက်ထားရှိမည့် အချိန်ကာလများကို အကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်ပါသည်။
9. သင့်အခွင့်အရေးများနှင့် အဆက်အသွယ်
သင့်နှင့်သက်ဆိုင်သော ဥရောပ အထွေထွေ ဒေတာကာကွယ်ရေးစည်းမျဉ်း (သို့) အလားတူ ဥပဒေအောက်၌၊ သင့်တွင် အောက်ပါအခွင့်အရေးအားလုံး (သို့) အချို့ကို ကျင့်သုံရန် အခွင့်ရှိပါသည်:
1. (i) သင့်ကိုယ်ရေးဒေတာကို ဆက်လက်ထားရှိမရှိနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်ကို အလိုရှိခွင့်နှင့် (ii) လုပ်ငန်စဉ်ဆောင်ရွက်မှု၏ ရည်ရွယ်ချက်များ၊ အလေးထားသည့် ကိုယ်ရေးဒေတာ၏ အမျိုးအစားများ နှင့်၊ ဒေတာလက်ခံသူများအပြင် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ဆက်လက်ထားရှိမည့် အချိန်ကာလများ အပါအဝင် ဆက်လက်ထားရှိသော သင့်ကိုယ်ရေးဒေတာထဲ ဝင်ခွင့် နှင့်/(သို့) သင့်ကိုယ်ရေးဒေတာ၏ မိတ္တူများကို အလိုရှိခွင့်၊
2. သင့်ကိုယ်ရေးဒေတာနှင့်ပတ်သက်၍ အမှန်ပြင်ဆင်ရန်၊ ဖယ်ရှားရန် (သို့) ကန့်သတ်ရန်အတွက် တောင်းဆိုခွင့်၊ ဥပမာ အကြောင်းရင်းမှာ (i) ၎င်းသည် မပြည့်စုံပါ (သို့) မမှန်ပါ၊ (ii) ၎င်းကို ကောက်ယူထားသည့် ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် မလိုအပ်တော့ပါ (သို့) (iii) လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်မှုအတွက် ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ကျေနပ်သဘောတူချက်ကို ရုပ်သိမ်းထားသည်၊
3. စီစဉ်ပေးရန် ငြင်းဆိုခွင့် နှင့် – အဆိုပါရုပ်သိမ်းချိန်မတိုင်မီ ဆောင်ရွက်ထားပြီးသော ဒေတာလုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များအပေါ် မထိခိုက်စေရပါ – သင့်ကိုယ်ရေးဒေတာဆိုင်ရာ ဒေတာလုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်မှုအတွက် ကျေနပ်သဘောတူချက်ကို အချိန်မရွေး ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်၊
4. သင့်ကိုယ်ရေးဒေတာ လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်အခွင့်အရေးများကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ချိုးဖောက်မှုကြောင့် ဥပဒေအရ တရားစွဲဆိုခွင့်အပြင်၊ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိ ဒေတာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ ရှေ့မှောက်တွင် တိုင်ကြားချက်များကို တိုင်ကြားခွင့်၊
5. (i) သင်က ကျွန်ုပ်တို့ကို ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံရှိသော မကြာခဏသုံးထားသော စက်သုံး-ဖတ်နိုင်သော ဖောမတ်ပုံစံဖြင့် စီစဉ်ပေးထားတဲ့ သင်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကိုယ်ရေးဒေတာကို လက်ခံရရှိရန်နှင့် ပြန်သုံးရန် အလိုရှိခွင့် (ii) အဆိုပါဒေတာကို ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှ အဟန့်အတားမရှိဘဲ အခြားထိန်းချုပ်သူသို့ ပေးပို့ခွင့်၊ စည်းစနစ်အရ ဖြစ်နိုင်သည့်နေရာမျိုးတွင် ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ အခြားထိန်းချုပ်သူသို့ တိုက်ရိုက် ပေးပိုးသော သင့်ကိုယ်ရေးဒေတာကို ရရှိနိုင်သည့် အခွင့်အရေး သင့်၌ ရှိထားရမည်။
သင့်ကိုယ်ရေးဒေတာက လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်မှုအတွင်း သက်ရောက်ပြီး သင်၏ သတ်သတ်မှတ်မှတ် အခြေအနေနှင့်ဆိုင်သော အကြောင်းအချက်များအပေါ်၊ သင်က ကန့်ကွက်ခွင့်ကို ကျင့်သုံးရန် အခွင့်ရှိသည်။ ဤကိစ္စမျိုးဆိုလျှင်၊ သင်၏ သတ်သတ်မှတ်မှတ် အခြေအနေနှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်ကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပေးရမည်။ သင် စီစဉ်ပေးသည့် အကြောင်းအချက်များကို အကဲဖြတ်ပြီးနောက်မှာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ကိုယ်ရေးဒေတာ လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်မှုကို ရပ်ဆိုင်းပါမည် (သို့) ရှိဆဲ လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်မှုအတွက် သဘောတူရမည်ဖြစ်သော ကျွန်ုပ်တို့၏ တရားဝင် အကြောင်းပြချက်များကို သင့်အား တင်ပြပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့က သင့်ကိုယ်ရေးဒေတာကို အသုံးပြုသည့် နည်းလမ်းအတွင်းရှိ ပြောင်းလဲမှုများကို (သို့) ပြောင်းလဲလိုက်သော တရားဝင် ပြဌာန်းချက်များကို ထင်ဟပ်စေရန်အလို့ငှာ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုပေါ်လစီအား မကြာခဏ အပ်ဒိတ်လုပ်ခွင့်နှင့် ပြောင်းလဲခွင့်ကို ထားရှိပါသည်။ အဆိုပါပြောင်းလဲမှုများဆိုင်ရာ ကိစ္စမျိုးတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြောင်းလဲထားသော ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုပေါ်လစီကို ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုက်တွင် ပြဌာန်းပါမည်။
ဤကိုယ်ရေးလုံခြုမှုပေါ်လစီအပေါ် ကျွန်ုပ်တို့၏ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ သင့်၌ မေးမြန်းချက်များ (သို့) တိုင်ကြားချက်များ ရှိလျှင်၊ (သို့) အထက်၌ ဖော်ပြထားသည့် သင့်အခွင့်အရေးကို ကျင့်သုံးလိုလျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ကို အောက်ပါတိုင်း ဆက်သွယ်ပါ:
သက်ဆိုင်ရာ Franke ကုမ္ပဏီကို ဝဘ်ဆိုက်ရှိ ထုတ်ဝေသူအမည်နေရာတွင် ပြဌာန်းထားပါသည်၊ ဒီမှာ နှိပ်ပါ.
Attn: ဒေတာကာကွယ်ရေး ကိုအော်ဒီနိတ်တာ
(သို့) အီးမေးလ်ဖြင့် ပို့ပေးရန်: placeholder_imprint_email